Haploidentical ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသခြင်း - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
နိုဝင်ဘာ 8, 2017 Pornchanok Iamsirirak, M.D. Professor Samart Pakakasama, M.D. Professor Suradej Hongeng, M.D.
Haploidentical ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသခြင်း – မွေးရာပါသွေးအားနည်းရောဂါနှင့်ကင်ဆာ
ရောဂါဝေဒနာသည်များ၏မိသားစုဝင်များ Stem ဆဲလ်များကို အသုံးပြု၍ဆေးကုသမှုပြုခြင်း
သွေးနှင့်ပတ်သက်သောကင်ဆာရောဂါများ (သွေးကင်ဆာ) နှင့်မွေးရာပါသွေးအားနည်းရောဂါဝေဒနာသည်
(thalassemia)၏တစ်သျူးအမျိုးအစားတူသောကျန်းမာသန်စွမ်းသူ၏ ရိုးတွင်းခြင်ဆီဖြင့် ရောဂါရှိသူတို ့အား
အစားထိုးကုသခြင်းဖြစ်သည်။ Samitivej ကလေးဆေးရုံကြီးတွင်ဆွေမျိုးသားချင်းများ၊ မိဘမောင်နှမသားချင်း၊ ထိုအပြင်ကလေးငယ်များပင် ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်သော “Haploidentical Bone Marrow Transplant” အသင်း အဖွဲ ့ကြီးအား ကလေးသွေးဗေဒ နှင့် ကလေးသွေးကင်ဆာဆရာဝန်ကြီးများဦးစီးဦးဆောင်၍အလှူရှင်များကို အားတက်သရောပါဝင်စေရန်ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါသည်။
မကျန်းမာသော သွေးဆဲလ်များတဖြည်းဖြည်းများပြားလာကာ ကျန်းမာသောသွေးဆဲလ်များထုတ်လုပ်မှုကို
လျှော့ကျစေသောရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အလှူရှင်၏ကျန်းမာသောသွေးဆဲလ်မှ ရောဂါရှိသူ၏သွေးဆဲလ်သို့သွင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို ့သွေးသွင်းလိုက်ခြင်းကြောင့်လူနာခန္ဓာကိုယ်မှ ကျန်းမာသောသွေးဆဲလ်များ ထွက်လာမည်ဟုယုံကြည်လက်ခံသည်။
HLAs (Human leukocyte antigens) ဆိုသည်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် တွေ ့ရှိရသော ပရိုတင်းဆဲလ်တစ်ခုဖြစ် သည်။ခန္ဓာကိုယ်၏ခုခံစွမ်းအားလုပ်ဆောင်မှုပေါ်ခွဲခြားပေးသော ဆဲလ်ဆစ်ခုဖြစ်သည်။ အလှူရှင်နှင့် လက်ခံသူ ၏ HLA အမျိုးအစားတူညီမှုရှိမှသာလျှင်ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါသည်။ များသောအားဖြင့်ကလေးလူနာများ သည် HLA အမျိုးအစားတူညီသောအလှူရှင်ကိုရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းရသောအချိန်သည် ကလေးအသက်ရှင်ချိန် ထက်ပိုမိုကြာမြင့်သည်။ HLA အမျိုးအစားတူညီသောအလှူရှင်မှာလည်း ၅၀၀၀၀ တွင် ၁ယောက်သာရှိသည်။ HLA အမျိုးအစားတူညီနိုင်မှုမှာ မိဘတွင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း နှင့်ဆွေးမျိုးသားချင်းမှာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
HLA အမျိုးအစားတူညီရန်ခက်ခဲမှုကြောင့်၊ Haploidentical Transplantation နည်းလမ်းကို စတင်မိတ်ဆက်၍ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း စတင်ပြုလုပ်လာခဲ့သည်။ ၄င်းဆိုလိုရင်းမှာ လူနာ၏မိဘများဟာ HLA အမျိူးအစားအပြည့်အဝ တူညီမှုမလိုဘဲ အလှူရှင်များဖြစ်လာနိုင်သည်။
၁. အလှူရှင်နှင့် လူနာ၏ HLA Antibody Screening ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း
၂. ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသမှုမပြုခင် – အလှူရှင်ကို ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သော ဆေးစစ်ချက် များဖြစ်သည့် ကျောက်ကပ်၊ အသည်း၊ နာတာရှည်ဖျားနာခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း
၃. ရိုးတွင်းခြင်ဆီပြုလုပ်ခြင်း – ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်လတွင်အောက်ပါအဆင့် ၃ဆင့်ကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။
က. ကင်ဆာဖြစ်ပေါ်လာသောရိုးတွင်းခြင်ဆီနှင့် အဖုအကျိတ် များကို ရှင်းထွက်ဖို ့ရန်အတွက် Chemotharapy သွင်းခြင်း
ခ. အလှူရှင် ၏ Stem ဆဲလ်များကိုထုတ်ယူပြီးလူနာကို Stem ဆဲလ်များထည့်သွင်းခြင်း
ဂ. ထိရောက်သောရိုးတွင်းခြင်ဆီကုသမှုပေးနိုင်ရန်အတွက်အလှူရှင်၏ဆဲလ်ကိုစောင့်ချိန် မှာရက်သတ္တပတ် ၂- ၄ ပတ်ကြာသည်။
၄. ရိုးတွင်းခြင်ဆီထည့်သွင်းပြီးနောက် ပထမ၃လမှာ ၁-၂ ပတ်အတွင်းရက်ချိန်းခေါ်ခြင်း၊ ၁- ၂ နှစ်ကြာမှရက်ချိန်းခေါ်ခြင်း
၃ပတ်ကြာပြီးနောက်လူနာခန္ဓာကိုယ်မှ၄င်းလက်ခံရရှိထားသော ရိုးတွင်းခြင်ဆီအသစ်ကို လက်ခံ၊မခံရှင်းလင်းစွာ သိရှိမည်ဖြစ်သည်။ လက်ခံဘူဆိုပါက အောက်ဖော်ပြပါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ် လာသော GvHD ဖြစ်ပေါ်လာမည်။
၄င်းတို ့မှာ- အရေပြားတွင်အနီစက်ထွက်ခြင်း/ကွာခြင်း၊ ပျို ့အန်ခြင်း များဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် Photopheresis ကိုသုံးခြင်းဖြင့် ၄င်းကဲ့သို ့ဖြစ်ပေါ်လာပါက လုံးဝမပေါ်စေရန် (သို ့)လျော့နည်းစေရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသခြင်းသည် ၁.၅ – ၂ လကြာပြီးလူနာသည်ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ်တွင် ဆေးရုံ၌နေ ရသည်။ လူနာသည်ခုခံအားကိုကျစေသောဆေးကို ၆လလောက်သောက်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။
• Hematologic disease: thalassemia
• Hematologic malignancy: leukemia, lymphoma
• အဖုအကျိတ် (Solid tumor)
• ရိုးတွင်းခြင်ဆီခန်းခြောက်ခြင်း (Bone marrow failure: aplastic anemia)
• မွေးရာပါချို ့ယွင်းသောရောဂါများ (Primary immune deficiency / inborn errors of metabolism)
Samitivej ဆေးရုံ မှ Haploidentical Transplantation
ကလေးသွေးဗေဒဆရာဝန်ကြီးများ၊ ကင်ဆာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၊ အဆုတ် နှင့်ရင်ခေါင်းဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများ၊ နှလုံးအထူးကုသမားတော်ကြီးများ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်များ၊ သွားဆရာဝန်များ၊ အထူးကြပ်မတ်ဆောင်မှသူနာပြုများ၊ Lab and Blood Bank မှနည်းပညာရှင်များ၊ Infection Control သူနာပြုများ၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်များ၊ ဖွဲ ့စည်းထားသော အသင်းအဖွဲ ့မှလူနာများကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးပြုစု စောင့် ရှောက်လျှက်ရှိပါသည်။ ထိုအသင်းအဖွဲ ့ကြီးကို ပါမောက္ခကြီး Suradej Hongeng M.D.၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ Samart Pakakasama. M.D., နှင့် Pornchanok Iamsirirak. M.D., တို ့ကဦးဆောင် ဦးစီးလျှက်ရှိပါသည်။
သီးသန် ့ခန်း၆ခန်း၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုသမှုအတွက် ခွဲစိတ်ကုသမှုခန်းကြီး ၄ခန်း၊ ကလေး၊လူကြီး အပြင်လူနာများအတွက်အဆင့်မြင့် ဆေးခန်းများဖြင့့်ဖွဲ ့စည်းထားသည်။၂၀၁၅ မှစတင်၍ Samitivej ကလေးဆေးရုံကြီး ရိုးတွင်းခြင်ဆီနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါအခြေအနေ ၄၆ ခု၊ ၄င်းတို ့အထဲမှ Haploidentical HSCT ၁၇ခု၊ အသက်တစ်နှစ်ရှင်နှုန်း ၁၀၀ % ဖြစ်ပြီး ၃၀ရက်အတွင်း ၁၀၀ % ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကျွနု်ပ်တို ့ဆရာဝန်ကြီးများသည် ၄င်း Haploidentical transplantation နှင့်ပတ်သက်သော ကျန်းမာရေးသုတေသန နှင့်ကျန်းမာရေးစောင်းပါးများကို အကြောင်းအရာကို
Samitivej ဆေးရုံကြီးမှ ကလေးရိုးတွင်းခြင်ဆီကုသမှု Photopheresis အသုံးပြု၍ အကောင်းဆုံးကျန်းမာကုသစောင့်ရှောက်မှုကိုပေးလျှက်ရှိပါသည်။